Matongerwo eNyika, 22 Mbudzi 2017
Chitatu 22 Mbudzi 2017
ZLHR Inoti Mauto Ari Kutyora Kodzero dzeVanhu Munyika
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu, eZimbabwe Lawyers for Human Rights, kana kuti ZLHR, rinoti riri kushushikana zvikuru kuti pane vanhu vanogona kunge vakusungwa panguva iyo mauto ari kuti ari kugadzirisa zvinhu munyika pasi pechirongwa cheOperation Restore Legacy.
Vedzisvondo Vokurudzira VaMnangagwa Kushanda neVamwe
Vatungamiri vemasvondo munyika vokurudzira vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri mutsva, VaEmerson Mnangagwa, kuti vakoke vanhu vose kusanganisira vemapato anopikisa makuru munyika, vedzisvondo pamwe nemasangano akazvimiririra kuti vaite musangano mukuru wekuumba gwara.
ZLHR Inomisa Kutsvagwa kweMuchuchisi Mutsva
Mutongi wedare repamusoro, Amai Priscilla Chigumba, vapa mutongo unorambidza boka reJudicial Services Commission, JSC, kuenderera mberi nekutsvaga muchuchisi mukuru wenyika, kana kuti Prosecutor-General mutsva.
Vamwe vanhu vari kumatanhu eMatabeleland vanoti mawoko aVaMnangagwa haana kuchena zvichitevera nhoroondo yavo munguva yeGukurahundi. Taurai Shava anotipa nyaya otevera
VaMnangagwa Vokuridzirwa Kukoshesa Bumbiro Remitemo
Kunyange hazvo vagari vekuMasvingo vari kupemberera kusiya basa kwaVaMugabe, vazhinji vavo vari kukurudzira kuti VaMnangagwa vakoshese bumbiro remitemo yenyika pamwe nekodzero dzevanhu.
Vanogara kwaMutare Voisa Tarisiro Huru Kuna VaMnangagwa
Vagari vekwaMutare vari kutarisira zvizhinji kubva kuhurumende itsva ichange yavepo svondo rino zvichitevera kutoreswa mhiko kwemutungamiri mutsva, VaEmmerson Mnangagwa.
VaMnangagwa Vogadzwa seMutungamiri weNyika neChishanu
Mutungamiri weZanu PF mutsva, VaEmmerson Mnangagwa, ndivo vave kutora chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kusiya basa iri neChipiri kwakaitwa nevanga vari mutungamiri wenyika,VaRobert Mugabe.
VaMugabe Vanoshamisa Veruzhinji Vachiti Vasiya Basa
VaMugabe vasiya basa mushure mekunge vazivisa paramende kuti vasiya basa semutungamiri wenyika.
Mauto Okurudzirwa Kudzosera Nyika Kune Vanoita zveMatongerwo eNyika
VaDewa Mavhinga vanoti kunyange havo vari kufara nedanho ratorwa naVaMugabe rekusiya basa, vanotarisira kuti mauto akurumidze kudzorera nyika mumaoko evanoita zvematongerwo enyika.
Vakawanda Vanoungana muAfrica Unity Square Vachiti VaMugabe Vasiye Basa
Mapato eMDC Obatana neZanu PF Mukubvisa VaMugabe paChigaro
Mapato anopikisa eMDC ose aro maviri anoti nhengo dzawo mudare reparamende nhasi masikati dzichatsigira hurongwa hwekubvisa, VaRobert Mugabe, pachishandiswa paramende kana kuti Impeachment.